Dragongwọ Ọrụ Dragongwọ Ọrụ: Mee Ka Nyocha Gị Na Okwu Ọnụ Ahịa | Martech Zone
Imirikiti obere ụlọ ọrụ kwenyere ihe karịrị ọkara ahịa ha na-abịa site na ndị na-ezo aka, ma 80% kwenyere na ha enweghị usoro iji gosipụta ntụgharị oge niile. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime 80%, ị naghị eji usoro azụmaahịa nke nwere otu mgbanwe ntụgharị kachasị elu nke usoro ọ bụla. Dragongwọ Ọrụ dragọn bu nkowa ahia banyere azumahia obodo. Ọ bụ ka obere azụmaahịa si arụ ọrụ ha zoo aka-mmemme enyi ịba ụba ahịa.
Dragongwọ Ọrụ dragọn iche na - agwakọta ihe akaebe nke ndị ahịa, ịkekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ụgwọ ọrụ ntugharị iji chụpụkwuo ego n'ọnụ ụzọ ha. Ọ bụ usoro dị mfe:
Kpọọ - Ndị ọchụnta ego jiri Dragongwọ Ọrụ togwọ Ọrụ ziga ndị ahịa akwụkwọ ịkpọ òkù ha na-arịọ ha ka ha dee obere akaebe.
Display - Ozugbo azụmahịa kwadoro, ndị ahịa na-akwado na-akpaghị aka na weebụsaịtị ha site na wijetị Dragongwọ Ọrụ, na na peeji nke Akaụntụ Akaụntụ na Dragongwọ Ọrụ wardgwọ.
Share. Ndị ahịa nwere ike ịkekọrịta azụmahịa na mgbasa ozi na-eji koodu ozi onwe ha. Ndị enyi nwere ike ịrịọ coupon ego.
ụgwọ ọrụ. Mgbe ndị enyi mere ihe mbụ ha zụtara, onye mere nrịba ama na-enweta ihe nkwụghachi ụgwọ.
Mgbakwunye ihuenyo atọ sitere na Dragongwọ dragon otu, Puptown Indy. Ha na-enye ndi edozi nkita, ulo, na oru nkuzi. Puptown na-enye ndị ahịa ọhụụ $ 25 kwụsịrị na ejiji ma ọ bụ nlekọta ụbọchị / ịnọ abalị. Maka ozi ọ bụla a gbapụtara agbapụta, onye ahịa ahụ na-akpata $ 5 site na nzụta ha na-esote na Puptown nyere $ 5 na Hamilton County Humane Society.
Azụmaahịa ọ bụla nwere peeji nke ya!
Enwere ike ịkekọrịta nyocha na Social Channels
Dragongwọ Ọrụ Ngwá Ọrụ Na-egosiputa nyocha kachasị ọhụrụ!
Puptown na-akọ na ọnụego mgbapụta coupon nke ndị ahịa ọhụrụ dị elu karịa ụdị mgbasa ozi ndị ọzọ ha jiri, yana ndị ahịa ahụ na-azụ ihe ugboro ugboro.
Tags: zoo-a-enyiNtuziaka engineahịa ahịaOzi Ntuziakareferralsụgwọ ọrụ dragonụgwọ ọrụnyocha mmadụokwu onu